Pietrusza Wola 50 Forest Log Cabin - I-Airbnb
Hlala kwikhabhathi ebuyiselweyo entle enegadi zakho kunye nehlathi! Umzekelo omhle woyilo lweplanga ofumaneka kuphela kwiinduli zeCarpathian zasePoland. Indawo yepaki yelizwe ekufikeleleka lula kuyo yonke imitsalane yengingqi kunye nezikhululo zeenqwelo moya.
Le yindlu yamaplanga ephangaleleyo, ekhululekileyo nethe qelele neyakhiwe kwithambeka lenduli ngasentabeni. Ubuncinci iminyaka eyi-100 ubudala, le propati ngomnye wemizekelo emihle kakhulu kwindawo yoyilo lwendawo 'yeRuthenian' kwaye iye yabuyiselwa ngothando ngamagcisa asekuhlaleni kunye namagcisa.
Thatha isidlo sakusasa kwiveranda egcakanyiswe lilanga, uphumle, uphumle ujikeleze okanye ube netheko lesidlo sangokuhlwa kule ndlu itofotofo, iphangaleleyo kunye nehonjiswe kakuhle ebuyiselweyo enesitovu samaplanga esibaswayo kunye nengaphakathi elinomtsalane leplanga.
Le ndlu ineholo enkulu, enomtsalane yokwamkela iindwendwe kumgangatho ophantsi, ngaphandle kwayo kukho indawo yokuhlambela ebanzi, ene-mosaic ehonjiswe ligcisa lendawo kwaye ifakelwe ibhafu, ishawa kunye neWC. Ukusuka ekunene kukho igumbi elingaphantsi eliphindwe kabini. Ukuya ngasekhohlo, kukho ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, elikhokelela kwigumbi lokuhlala elikhulu.
Izixhobo zasekhitshini ziquka amakhonkco amabini akhutshwa ngerhasi, i-oveni yombane ezimeleyo, i-toaster enezilayi ezi-4, ifriji/isikhenkcezisi esikhulu seSMEG, izitya, izinto zokugalela, iimbiza neepani, ngelixa igumbi lokuhlala linesidlali-CD/ unomathotholo kunye nenani leencwadi nemidlalo. .
Indawo yokuhlala ephezulu inegumbi elinye elikhulu, eliphindwe kabini elijonge iinduli ezijongene neenduli kunye newele elinye elijonge umsinga wentaba ongezantsi.
Ikhabhathi yelog ifikeleleka nge-drive ejikelezwe ngumthi, evula igadi enkulu, ebiyelweyo enokujinga komthi, kunye neshawari yangaphandle kunye neWC. Kukwakho neebhayisekile, i-BBQ kunye neenkuni onokuthi uzisebenzise eshedini.
Ngasemva kwendlu kukho ukuhla ngokuthe ngcembe kumphunga wentaba onokufikelelwa ngezinyuko zomthi. Ibhulorho yeenyawo phezu komsinga ikhokelela kwicala lenduli elinamahlathi ashinyeneyo, ngeli lixa ithafa elijongene ngqo lithe nca ngokuthambileyo lisingise kwipolisa engasese elungele iipikniki.
Le khabhathi intle yelog ilele ngaphakathi kukudityaniswa kweelali, umhlaba wasefama, imilambo, amahlathi kunye neendawo zokuhlala eziziintaba, ezinepepile ngeendawo zokuhlala zolwakhiwo lwamaplanga olufanayo kunye nembonakalo entle kakhulu ukuya kuthi ga kwiliso elinokubona.
Le ndawo 'yePaki yeSizwe' yindawo yokuhlala enamahlathi ashinyeneyo kunye nezityalo ezityebileyo kwiiNtaba zeCarpathian ezikuMzantsi Mpuma wePoland. Kukho iintlobo ezininzi zeentyatyambo ezinqabileyo zasendle kunye namabhabhathane, kunye neengwamza, amaxhalanga, iihagu namaxhama.
Ipaki yaseCzarnorzecko-Strzyzowski ineendlela ezintle zokuhamba kunye neebhayisekile. Kukho i-16 yeemayile zokukhwela ibhayisekile ejikelezayo enokuthi iqalwe ukusuka ekunene ngaphandle kwendlwana kwaye ithatha "amatye e-Spinners" kunye namabhodlo amahle e-gothic ye-14th Century Kamieniec Castle.
Ukuba unomdla wokufumana ukutya kunye nokutya kwasendle, ingcaphephe yokutya kwasendle kunye nengcali yezityalo eyaziwayo yasePoland ibamba ucweyo lokutya kunye ne-ethno-botanical, kwilali eselumelwaneni entwasahlobo, ehlotyeni nasekwindla.
Ivenkile yasekuhlaleni yelali, indawo yokutyela yaseKamieniec ebalaseleyo kunye neMicro Brewery kunye nebhari eWojkowka zonke zingaphakathi kwe-2 - 4 yeemayile radius.
Ikomkhulu lengingqi 'iKrosno', enendawo enkulu yentengiso, izindlu zamandulo zokuhlala kunye neecawe zamaxesha aphakathi kukuhamba ngemizuzu eli-10 nje. Zininzi iindawo zokutyela, iikhefi kunye neebhara ezingqonge isikwere, ezibonelela nangantoni na ukusuka kwi-Italian ukuya kwi-Arabic cuisine kunye neendawo ezininzi zokuhlala ngaphandle kweenyanga zasehlotyeni, isikwere siyaphila kwaye siba yindawo yeziganeko ezininzi ezivulekileyo kunye neminyhadala.
'UDonka' kunye noPiotr baya kuba lapho ukuze bakubulise ekufikeni kwakho. Bathetha isiNgesi kakuhle kwaye baya kuba bekhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuba uyabafuna. Wamkelekile ukuba ushiye inombolo yabo yeselula kunye nosapho kunye nabahlobo, ukuba bafuna ukuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
'UDonka' kunye noPiotr baya kuba lapho ukuze bakubulise ekufikeni kwakho. Bathetha isiNgesi kakuhle kwaye baya kuba bekhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuba uyabafuna. Wamkelekile u…